ဟိုတစ ဒီတစ အတွေးစများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ဟိုတစ ဒီတစ အတွေးစများ
ဟိုတစ ဒီတစ အတွေးစများ
Posted by ဆူး on Mar 21, 2012 in How To.. | 23 comments
ဆူး စိတ်ကူး ဟိုတစ ဒီတစ အတွေးစများ
မြန်မာပြည်ကတွေ ရဲ့ စည်းကမ်းပိုင်း ကတော့ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ အမှိုက်ကိစ္စ အတွက် မြို့က လူတွေ ပွက်လော ပွက်လော ပြောလာကြပြီး မြောင်းတွေပိတ်လို့ ရေတွေ ကြီးလို့ စိတ်ပျက်နေကြတာတွေ အမှိုက်ကား မလာလို့ စိတ်ညစ်ရ ကိုယ့်အမှိုက် ကိစ္စ ကိုယ့်တာဝန် မယူချင်တော့တဲ့ အခါ ကြုံတဲ့ နေရာမှာ ပုံကြရင်းနဲ့ ကြီးထွားလာတဲ့ အမှိုက်ပုံတွေ သိမ်းလိုက်ကြ ပုံလိုက်ကြနဲ့ သံသရာလည်နေကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ လူနေထူထပ်လို့ ပိုဆိုးလား ထင်မိပါသော်လည်း နယ်မြို့တွေကို ခရီးထွက်တဲ့ အခါ ပိုမို ဆိုးရွားနေတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ နယ်မြို့တွေမှာ လူနေမထူထပ်တဲ့ အတွက် မြေနေရာ ကျယ်ကျယ် နဲ့ စားပြီး သောက်ပြီး ပြစ်ဖို့ နေရာ ကတော့ အိမ်အောက်မှာ ပြစ်တာမျိုး လမ်းသွားရင်းနဲ့ ပြစ်တာမျိုးနဲ့ လူများများ သွားလာနေတဲ့ ကျောင်းတို့ ဘာတို့နား ရောက်တော့မယ် ဆိုရင် သိသိသာသာ အမှိုက်တွေ အများကြီးတွေ့မိပါတယ်။ အမှိုက်ရိုးရိုးကတော့ မြေသြဇာ ဖြစ်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွားပေမဲ့ ပလပ်စတစ် အမှိုက်ကတော့ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီတဲ့ အထိ မပျက်မစီး နေနိုင်တယ်လို့ သိထားပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့ နယ်မြို့က လူတွေ နောက်နှစ်ပေါင်း မကြာခင်မှာ လွယ်လွယ် ပြစ် နေတဲ့ အကျင့်နဲ့ ပိုဆိုးလေမလားတွေးမိတယ်။ မိုးသိပ်ကြီးတဲ့ အရပ်ဆိုလည်း တနှစ်တခါ မိုးရေက သယ်ဆောင်ပြီး မြစ်ထဲ ရောက်သွား ပင်လယ်ထဲ ရောက်သွားလည်း မပျက်မစီးပဲ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်ကာ လူတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ သတ္တိတွေ ရှိနေတယ် ဆိုရင် တော်တော် ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
လွယ်လွယ်ပြစ်ထားတဲ့ ပလပ်စတစ် အမှိုက်တွေကို စုပေါင်းကောက်ခိုင်းရင်လည်း ဘယ်သူမှ ကောက်ချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပလပ်စတစ် တစက ပြန်လည် အဖိုးတန်တဲ့ အရာတခု ဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ စုစည်းသိမ်းဆည်းပြီး လွယ်လွယ်မပြစ်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ပြန်လည် အဖိုးတန်ဖို့ ဆိုတာကလည်း အဖိုးတန်စေတဲ့ အရာ တစ်ခု အနေနဲ့ အသုံးဝင်ဖို့ လိုတယ်။
ကိုရီးယားမှာ တာယာတွေကို လှီးပြီးတော့ သံဘောင် တံတခါးလေးမှာ ခင်းထားပါတယ်။
တာယာအပြားထု ၁မတ်အရွယ်ကို ၂လက်မ အနံနဲ့ အလျားကတော့ ၆လက်မ အရွယ် ၃ခုလောက်ကို စုစည်းပြီး ဘလော့တုံး ပုံစံမျိုး ဖြစ်အောင် လုပ်ထားပြီး အခင်းပြား အနေနဲ့ ခင်းထားတာ တွေ့မိပါတယ်။
ခရီးသွားခေါင်းဆောင်ကတော့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ငါတို့ တိုင်းပြည်က ဒီလို အလေအလွင့်မရှိအောင် အသုံးပြုတတ်တယ်။ တောင်နဲ့ မြောက် စစ်ဖြစ်နေလို့ ၁၉၈၀ ကျော် နောက်ပိုင်း စစ်အေးချိန်မှာ တိုင်းပြည်မှာ ဘာမှ မရှိဘူး အခုဒီလို ဖြစ်လာတာ ဒီလို အသုံးပြုတတ်လို့ ဆိုပြီး ပြောပြပါတယ်။ အားကျ စရာ ကောင်းလှပါတယ်။
မြေကြီးပေါ်မှာ ဟိုတစ ဒီတစ ဖြစ်နေတဲ့ ပလပ်စတစ်လေးတွေကို ဖုန်တွေ မြေကြီးတွေ အညစ်အကြေးတွေလည်း ပေပွနေတဲ့ ပလပ်စတစ်လေးတွေကို အရည်ကျိုစက်နဲ့ အပူဖိအားပေးပြီး မာအောင် လုပ်ပြီး အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းတွေ ဘာတွေ များ ပြန်လုပ်ရင် ကောင်းလေမလား။ နည်းပညာ မရှိရင်တောင် အလွယ်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ အပူပေးပြီး အလုံး လုပ်ပြီး ကျောက်ခဲတုံးလို လုပ်ပြီး အရောင်ထည့်ပြီး အိမ်ရှေ့တွေမှာ ခင်းတဲ့ ရေဆေး ကျောက်လုပ်ရင် ကောင်းလေမလား။ အိမ်ရှေ့တွေမှာ ခင်းတဲ့ ရေဆေးကျောက် လုပ်တဲ့ ကျောက်စရစ် ခဲတွေ ထက်တော့ ပိုဆွဲဆောင်မှု ရှိအောင် အရောင်တွေ ဘာတွေ လုပ်ရင်တော့ ဈေးကွက်တခု ရနိုင်မယ် ထင်တယ်။ စိတ်ကူးပေါက်ရာ ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ။ လမ်းတကာမှာ ပွနေတဲ့ ပလပ်စတစ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားလေမလား တွေးမိပါတယ်။
ကျနော် ရွာသွားတုန်းကလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ အရင်က သန့်ရှင်းနေတဲ့ချောင်းလေးဘေးမှာ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေ အမှိုက်တွေနဲ့ မြင်ရတော့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး၊ အခု ဆူး တွေးသလိုလေး အဆင်ပြေရင် ကောင်းမှာပဲ..
အတွေးလေးကတော့ အဆိုးဘူးပဲ………………. အဲလိုလေး အမြဲတွေးနေမယ်ဆို ကောင်းမယ်…….. အာဟိ အာဟိ………… ရွှေပြည်တော်ရယ် မျှော်နေလဲဝေး……………….
အဲဒီဈေးကွက်ကို ဘယ်သူက စတင်အကောင်အထည်ဖော်မှာလဲ။ ကိုယ့်ဘာသာ စီးပွားဖြစ်အရင်လုပ်မှသာ ပပျောက်မယ်ထင်ပါရဲ့နော် ဆူးရယ်…
မြန်မာပြည်မှာ ကပ်စားလို့ အောင်မြင်နေတဲ့ သူဌေးတွေ အများကြီးပါ။
မြန်မာပြည်က.. ပွစာတက်နေတဲ့..ကြွပ်ကြွပ်အိပ်တွေ.. ရီဆိုင်ကယ်လုပ်လို့ရတယ်လို့မထင်ဘူး..
ယူအက်စ်မှာလည်း.. တချို့အိပ်တွေက.. ရီဆိုင်ကယ်ရတယ်.။ ရရင်..ရကြောင်းရေးထားတယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. ကလေးကျောင်းသူားတွေ.. အမှိုက်ထွက်ကောက်တာမျိုး ..နန်းပရောဖစ်တွေ အမှိုက်ထွက်ကောက်တာမျိုးလုပ်လေ့ရှိတယ်..။
ကလေးတွေအမှိုက်ကောက်တာ.. လူကြီးတွေမြင်ရင်.. အမှိုက်ပစ်ရမှာ.. ရှက်တတ်လာတယ်…
အဲဒါမျိုး မြန်မာပြည်မှာပညာပေးလုပ်သွားနိုင်ရင်.. အင်မတန်အကျိုးရှိမယ်ထင်မိတယ်..။
ဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူဟာ.. တချိန်ချိန်မှာ.. ကမ္ဘာကပေးတဲ့ဆု တခုခုလည်းရနိုင်ပါတယ်..။
You’d think so, but you’d be wrong. Well, mostly wrong, anyway. While plastic is normally recyclable, traditional grocery bags are not because they’re made from petroleum products.
This inconvenient truth has led the political leaders of San Francisco to enactaban on the plastic bags. Inalittle less than six months, area grocery stores will be required to offer recyclable and biodegradable alternatives.
Interestingly, as far as we can tell, some of these plastic bags are recycled. The Christian Science Monitor reports that nationally, “less than 1 percent of 100 billion plastic bags tossed each year get recycled.” Obviously that’savery poor ratio, but it does show that the bags are technically recyclable.
The Sierra Club explains how. Supermarkets often offer to collect the plastic bags — you may have seen the bins in front of stores. “In 2003 Safeway collected 7,000 tons of plastic grocery bags, pallet-wrap plastic, and dry cleaners’ bags. The plastic is sold toacompany that makes…lumber-like boards.”
Still, few of the bags are ever collected, leaving the vast majority to float around in the breeze. In fact, the typical plastic grocery bag takes anywhere from 450 to 1,000 years to break down. The moral? Bring your own bags. Or at the very least, ask for paper (and then recycle ’em).
ပလပ်စတစ် စက်ရုံတခုကို ရောက်ဖူးတယ်။
ကော် အဟောင်းတွေ ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ မီးပူပေးပြီး ကျိုတယ်.. အရမ်းတော့ ညော်တယ်။
ပြီးတော့.. အတောင့်လေးတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး အတုံးလေးတွေ ဖြစ်အောင် ခုတ်ထစ်ရပါတယ်။
စရိတ်အနေအထားက များမယ်တော့ ထင်တယ်။
2. In addition, economics of recycling plastic bags are not appealing. Recyclers would much rather focus on recycling the vast quantities of more viable materials such as soda and milk bottles that can be recycled far more efficiently. If the economics don’t work, recycling efforts don’t work.
For example, it costs $4,000 to process and recycle 1 ton of plastic bags, which can then be sold on the commodities market for $32 (Jared Blumenfeld, director of San Francisco’s Department of the Environment as reported by Christian Science Monitor in 2007).
အဲလိုတွေ့တယ်..။ မြန်မာပြည်နဲ့.. နည်းနည်းတော့ နှိုင်းတွက်နိုင်မှာပေါ့…
ကြည့်ရတာ ရီဆိုင်ကယ်လုပ်မယ်ဆိုတာထက်စာရင်.. ဒီအတိုင်း အလုပ်လက်မဲ့တွေကို.. လိုက်ကောက်ခိုင်းပြီး တပေါင် တဒေါ်လာပေးမယ်လုပ်လိုက်တာက.. ပိုကောင်းမယ်ထင်မိတယ်..။
ဆိုတော့.. အခုဆူးမမ စုလှူသလိုမျိုး ငွေတွေအလှူခံ.. ဒေါ်လာ ၁ထောင်ရပြီဆို.. တတန်စာလောက်ပလပ်စတစ်အိပ်တွေ မပျောက်သွားဘူးလား..
အလှူခံတယ် ဆိုတာ လွယ်တာမှ မဟုတ်တာ..
ရန်ပုံငွေ ရှိရင်တော့ လုပ်လို့တော့ ရတယ်။
ခပ်ရိုးရိုး တွေးမိတာ ဆွေးနွေးကြည့်ယုံတင်ပါ။
ဒါမျိုးတွေက အစိုးရဘက်က လုပ်ရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ် လို့ ထင်တာပဲ..
နောက်နှစ်ခါ မဲဆွယ်ကြရင် အဲလို လုပ်ကြရင် ကောင်းမယ်နော်။
စိတ်တူ ညီရာ လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ အတူဝိုင်းဝန်းရင်ရလောက်တယ်..
တပတ်တရက်ပေါ့ဗျာ.. စစ်တွေဆိပ်ကမ်းကို ဒီလိုပဲလုပ်အားပေးတွေစုပြီး..
အန်တီပဒုမ္မာလည်း ပို့စ်တခုမှာ ပြောဖူးတယ်..
၃လမ်းမှတ်တိုင်မှာ လူတယောက် လုပ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့တယ်တဲ့
ဒါက လက်တွေ့မျက်မြင် အကျိုးများမဲ့ ကိစ္စရပ်ဗျ..
ကောက်မယ်လို့ စဉ်းစားမဲ့သူများရှိရင် လက်တွေ့ကျကျ ပူးပေါင်းပါဝင်မယ်..
Yoh.. tha gyee…
Dun think so…
If recycling technologies are really gr8 and profitable,
Blah blah f**king chienses will come to us to buy those things….
So, there’s only2solutions,
1) reduce using those
2) think and invest upon recycling ….
If not, modern markerters … mee dote you or…..
Environmental-friendly firms will suck-up ur market share…
Awarebness…….. hey…. for ur happy ending ne…
အနည်းဆုံး သပ်ယပ်သန့်ရှင်းမှုကိုတော့ ပြန်ရမှာပဲဗျ။
ကလေးတွေကစပြီး ပညာပေးလုပ်မှ နောင်တစ်ချိန်မှာ လုံးဝပပျောက်သွားမှာ …
အခုဆိုရင် မြို့ပေါ်နေလူတော်တော်များများက အမှိုက်မြင်တာနဲ့ လိုက်ကောက်ပြီး အမှိုက်ပုံးထဲကို ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ရှိကြတယ် … … ခက်နေတာက အမှိုက်တွေကိုပစ်ဖို့ အမှိုက်ပုံးရှာလို့မတွေ့ဘူးလေ …
တကယ်လိုအပ်နေတာက အမှိုက်ပုံးများနဲ့ အမှိုက်သိမ်းကားဖြစ်ပါတယ် …
ဖိလစ်ပိုင်မှာလို့ထင်ပါတယ် ။ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေကို တောက်တောက်ဆင်း ပြီး ရွှံနဲ့ ရောပြီး အုတ်ပြန်ဖုတ်တယ်လို့ တစ်ခါတော့ ဖတ်ဘူးလိုက်ပါတယ် ။
ဆူးရေ .. အဲ့ဒီ့လို recycle တစ်ခုခု ပြန်လုပ်နိုင်အောင် ထွင်နိုင်ရင် CNN ကပေးတဲ့ ဆုတွေဘာတွေ ရမှာနော် .စဉ်းစားထား ..
ဒေါ်ဝေေ၀ ရေ ။ ၇န်ကုန်မှာ အမှိုက်လှည်း ၅၄၉ စီး အမှိုက်သိမ်းကား အသစ် ၂၅ စီးတိုးချဲ့ထားပါကြောင်း နဲ့ နောင်လည်း ဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမှာပါလို့ ပြည်မြန်မာ ယခု အပါတ် စာစောင်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရကြောင်းပါ။
တစ်ဦးချင်း စီမှာလဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဈေးဆိုင်တွေ ကလဲ ကိုယ့်ဆိုင်က အမှိုက်ကို အများပိုင် လမ်းပေါ်မပွအောင် တာဝန်ယူသင့်ပါတယ်။
အိမ်ဆိုလဲ အိမ်အလျှောက် ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ပြောရရင် အမှိုက်တွေ မပွ အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ် ဆိုတာကို စဉ်းစားပေးရမှာကတော့ စည်ပင်ဝန်ထမ်း သက်ဆိုင်သူ တွေ ရဲ့ တာဝန်ဘဲ။
ကိုယ်က စနစ်တကျ လုပ်ပေးထားပါရက် နဲ့ ဖွ ရင် စည်းကမ်းအတိုင်း ဒါဏ်ရိုက်ပေါ့။
အမှန်သာဖြစ်ပါစေ။ တကယ် သန့်ရှင်းမှု ကို လိုလ်အားတဲ့ပြည်သူတိုင်း လိုလားမှာပါ။
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေကပေးနိုင်တဲ့ ဒုက္ခတွေမှာ တိရစ္ဆာန်တွေ စားမျိုမိလို့ အူပိတ်ပြီးသေရတတ်တာလည်းပါတယ်။
မီးရှို့ပစ်ရင်လည်း ရှူမိတဲ့သူတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကာဆီနိုဂျင်တွေ ထွက်တယ်ဆိုတာလည်းပါပါတယ်။
2000 gp ရဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း အသစ်ဖွင့်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ Say No to Plastic သင်ပေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မုန့်ရောင်းသူတွေကလည်း အလွယ်ရတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ပဲ သုံးချင်ကြတယ်။
အမှိုက်ပစ်ဖို့ အမှိုက်ပုံးတွေလည်း လုံလုံလောက်လောက် မရှိတော့ ပစ်ချင်ရာပြန်ပစ်ကြပြန်ရော။
ဒီအမှိုက်ကို တန်ဖိုးတစ်ခုပေးပြီး ၀ယ်မှ အလွယ်တကူ မစွန့်ကြမှာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်လောက်က စက်မှု(၁) ၀င်းသူဇာဆိုင်တွေကတဆင့် သတင်းစာဟောင်းတွေကို အပြင် ဈေးထက်ပိုပေးဝယ်တယ်လို့ ကြားမိတယ်။ဘယ်လောာက်ကြာတော့ ပြန်ရပ်သွားသလဲတော့ မသိလိုက်ဘူး၊
သတင်းစာဝယ်ပေးသလို ပလပ်စတစ်ဟောင်းလည်း ၀ယ်ပေးရင် သန့်ရှင်းရေးလည်းရ၊ပစ္စည်းတစ်ခုခုလည်း ပြန်ရ တစ်ချက်ခုတ် ၂ချက်ပြတ်ပေါ့နော်။
မလတ်ရေးသလို စည်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်ရင် ဒဏ်လည်းပေးသင့်ပါတယ်
မန္တလေးမှာတော့ ခုနောက်ပိုင်း ရီဆိုင်ကယ်လုပ်လို့ရတဲ့ ပလတ်စတစ်အကြည်တွေပဲ အသုံးများလာပါတယ်။ အရောင်ပါတဲ့ ဆွေးမြေ့ဖို့ ခက်တဲ့ ပလတ်စတစ်တွေ မမြင်တာတောင် အတော်ကြာနေပါပြီ။ သူတို့ လုပ်သမျှထဲမှာ ဒီတခုတော့ ကိုယ့်မြို့မှာ ပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပစ်နေကြတာကတော့ အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲ သေးပါဘူး။ ပိုတောင် များလာသလိုပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဒီလို အမှိုက်ကောက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလေးတွေမှာ ပါဝင်လုပ်အားပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ မနက်ဖြန်မနက်စောစောတောင် ပရဟိတ အသင်းတခုမှာ လုပ်အားပေးလိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ စတာကြာပါပြီ ကိုယ်က အခုမှ လေ့လာရင်း လိုက်မှာပါ။ လုပ်ချင်နေတာ ကြာပါပြီ ခုမှ အချိန်အဆင်ပြေလို့ပါ။
မန်းလေးမှာ လဲ အဲလို အမိူက်ကောက်တဲ့အသင်းများရှိပါ၏။
ပလပ်စတစ်ကတော့ ရီဆိုက်ကယ်လုပ်တာ မန်းလေးမှာ အလုပ်ဖြစ်၏။
ရန်ကုန်မှာက နည်းနည်းတော် သေးတယ် ထင်တယ်။ နယ်မြို့တွေမှာ လုံးဝ စည်းကမ်းမရှိဘူး။
အဲလို ရေးလို့ နယ်မှာ နေတဲ့ သူတွေကို အပြစ်တင်တာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
နယ်မြို့လို လူနေသိပ်သည်းမှု နည်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ဒီလောက် ပေါပေါများများ ပလပ်စတစ် အိတ်တွေ လမ်းတကာ မြောင်းတကာမှာ လွင့်ပြန်နေမယ် ဆိုရင်.. နောက်ထပ် မကြာခင်မှာ ထိုင်းလို ရေကြီးတာတွေ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မှာ စိုးရပါတယ်။
ကိုထူးဆန်း ပြောသလို ပလပ်စတစ် အစတွေကို ခုတ်ထစ်ပြီး အုတ်ဖုတ်တဲ့ အထဲ ထည့်လုပ် အလွန်ကောင်းလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
အုတ်ဖုတ်တဲ့ သူတွေက မြေကြီး သီးသန့် ဖုတ်တာမို့ မြေကြီး နဲ့ အနည်းငယ် ရောလို့ ခိုင်ခံ့မှု အားမလျော့ဘူး ထင်တာပဲ.. ဟုတ်မဟုတ်တော့ ပညာရှင်တွေပဲ ပိုသိပါလိမ့်မယ်။
အစိုးရက နည်းနည်း ကြပ်လိုက်ရင် အဲဒီလို ဖြစ်လာလေမလား.. ဟိဟိ..
သဂျီး ပြောသလို လွတ်တော်မှာ တင်ပြသင့်တယ်။
ရီဆိုင်ကယ်လုပ်တာ နည်းပညာသိပ်အမြင့်ကြီးတော့ ဟုတ်ပုံမရဘူး သို့သော် လုပ်ပုံလုပ်နည်း သေသေချာချာ သိမှတော့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ပြီးတော့ ထွက်လာမည့် ရီဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းများအတွက် ဈေးကွက်လည်း ရှိရမယ်။ အစိုးရက အားပေးရင် သေချာပေါက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာဗျာ ဘဘဂျီးတွေဆီက ရွေတုံးဂျီးတွေကို အရည်ကျိုပြီး အိုးခွက်တွေလုပ်တဲ့ ဒန်သတ္တုအစားထိုးသုံဂျရင်၊ ငွေစက္ကူတွေကို ပျော့ဖတ်လုပ်ပြီး ကျောင်းသုံဗလာစာအုပ်လုပ်ကြရင်ကောင်းဘူးလား…။
ဒီနေ့မနက်ပဲ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက သတိပေးနှိုးဆော်စာတွေ တိုက်ခန်းတွေမှာ လိုက်ဝေပါတယ် … အမှိုက်ကို အစို အခြောက်ခွဲခြားပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အိတ်နဲ့ထည့်ပြီးပစ်ရမယ်တဲ့ .. အမှိုက်အစို (မီးဖိုချောင်ထွက်) တွေကို အပြာနုရောင်အိတ်နဲ့ နေ့စဉ်စွန့်ပစ်ခွင့်ရှိပြီးတော့ အမှိုက်ခြောက် (ရောင်းစားမရသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်း)တွေကိုတော့ အစိမ်းနုရောင်အိတ်နဲ့ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ၂ ရက်ထဲသာ စွန့်ပစ်ခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့ .. အမှိုက်အိတ်နဲ့မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းများကို လက်ခံသိမ်းဆည်းမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲံ ..
ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ကနေ စတင်အကောင်အထည်ဖော်မည်လို့ ရေးထားပါတယ် …
အစအဆုံးရိုက်ရမှာပျင်းလို့ အနှစ်ချုပ်ပြီး ရိုက်လိုက်ပါတယ် …